Sedex todobaad kadib Avengers: Infinity War waxaa USA Boxoffice-ka kala wareegi doono Deadpool 2 – Filimside.net
Sedex todobaad kadib Avengers: Infinity War waxaa USA Boxoffice-ka kala wareegi doono Deadpool 2
Taariikhda: May 18, 2018
Filimka Super Hero-ga ah Deadpool 2 ayaa sheeko ahaan siweyn loo amaanay waxaana haatan la sadaalinaa inuu soo idleyn doono mudo sedex todobaad ah tiyaatarada Mareekanka flimka awooda ku heestay Avengers: Infinity War.
Shirkada Marvel ayaa sanadkaan Hollywood-ka heesato madaama 20-ka isbuuc ee sanadkaan 9-todobaad ka mid ah Boxoffice-ka hogaaminayay filimka Marvel iska leedahay.
Deadpool 2 wuxuu noqon doonaa filimada shahaadada R-rated la siiyo midkiisa ugu bilaabashada wanaagsan sedexda maalmood ee ugu horeyso.
Qiyaasta xili hore waxay muujineysaa in Deadpool 2 keeni doono $138.0 M waana lacag heer sare ah asigoo dhaafi doono qaybta kowaad Deadpool oo labo sano ka hor keenay $132.43 M sedexda maalmood ee ugu horeesay.
Dhinaca kale filimka Avengers: Infinity War haddii kaalinta kowaad todobaadkan lagala wareego USA Boxoffice micnaheeda ma ahan inuu masraxa ka dagaayo waxaana la rajeynaa $29 million inuu keeno todobaadkiisa afaraad sedexda maalmood ee ugu horeyso asigoo ganacsigiisa gudaha Mareekanka gaari doono $600 million mudo 24-maalmood ah.
Avengers: Infinity War horey wuxuu ganacsi ahaan ugu soo xareeyay $1.686 billion lacagtiisa guud isku darka gudaha Mareekanka iyo daafaha caalamka waana filimka afaraad ee ebid lacagaha ugu badan soo xareeyo.
Fadlan hoos kaga bogo 5-filim ee lacagaha ugu badan ebid soo xareeyeen isku darka gudaha USA iyo daafaha caalamka (Worldwide Gross):
1. Avatar (2009) – $2.78 billion
2. Titanic (1997) – $2.18 billion
3. Star Wars: The Force Awakens (2015) – $2.06 billion
4. Avengers: Infinity War (2018) – $1.68 billion (Mudo 21-maalmood ah)
5. Jurassic World (2015) – $1.67 billion